မိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စတင်ခဲ့တဲ့ မီဂျီခေတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မင်းတုန်းမင်း ခေတ်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲသည့်နောက်ပိုင်း နှစ်များမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်တွေရဲ့ အကူအညီကြောင့် အာရှတိုက်မှာ ပထမဆုံး စက်မှုထွန်းကားပြီး တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Posted by ရွက်မွန် at 5:54 PM
Bae Gyi, please study again! otherwise they will come and cut your head off! what i see is--nothing to compare about those2things.
Ari Ga Thol Ko Zaw Min...
ခေတ်အဆက်ဆက်အတွင်း နိုင်ငံရေးထဲ စစ်ဗိုလ်တွေ ဝင်လာပြီး တောပြောတောင်ပြော မတော်မတဲ့ ပြောတာတွေကြားတိုင်း ဖေဖေက “ဒီကောင်တွေ တို့တတွေ ဘီအိုင်အေတုန်းက ဝင်တဲ့ စိတ်မျိုးတွေ ဝင်နေပြီနဲ့တူပါရဲ့ကွာ” လို့ငြီးတွားပြောဆိုတတ်ပါတယ်။
(Bogyoke Kyaw Zaw)